Masinina famoronana maska ​​sa kapoaka? Rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity aho dia tsy hafangaro!
Mihabetsaka ny olona mampiasa sarontava any ivelany, mitombo ny filan'ny sarontava, ary samy hafa ny fangatahan'ny saron-tava. Ity fangatahana ity dia valinteny ho an'ireo mpanamboatra masinina maska, koa mila mampivelatra sy mamokatra karazana masinina misaron-tava izahay mba hahafeno ny filan'ny manuf mas ...
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny saron-tava N95 sy KF94 dia kely noho ireo lafin-javatra izay ankafizin'ny ankamaroan'ny mpampiasa. KF94 no fenitra "sivana Korea" mitovy amin'ny naoty amerikana N95. Fahasamihafana eo amin'ny saron-tava N95 sy KF94: Misy tabilao mijery ...
Manomboka amin'ny fandraisana fanomezana avy amin'ny firenena maro ka hatramin'ny fanomezana fitaovana ara-pahasalamana ho an'ny firenen-kafa. Ao anatin'ny fotoana fohy iray volana mahery, ny "iray ao anatin'ny iray" saron-tava sinoa dia taratry ny tanjaka mahery namboarina tany Chine ary mamelombelona ny hafainganan'ny fitaovam-pitsaboana ...